Qaabka bandhigga iyo madasha ayaa is beddeleysa. Hadda - ONLINE - Nidaamka Baradhada
Qabanqaabiyaasha carwada III International takhasus gaar ah ee teknolojiyadda dhirta iyo dhaqashada xoolaha "AgroExpoSibir - 2020" iyo II International Agrarian Forum "Agroindustustrial complex of Siberia: xaadirka iyo mustaqbalka" waxay go'aansadeen inay joojiyaan dhacdooyinka qaabkii caadiga ahaa.
Sababta go'aankani u yahay cudurka faafa ee coronavirus. Haddii inta badan gobollada Galbeedka Ruushka ay horey u gaareen marxaladda labaad si meesha looga saaro xayiraadaha, qaarna ay gaareen heerka saddexaad, markaa Degmada Federalka Siberiya waxay sii wadaa inay kusii nagaato marxaladda koowaad, oo inta badan gobolladeeda xitaa ma aysan gaarin heer ugu sarreeya dhacdooyinka.
Magaalada Altai Territory iyo magaalada Barnaul, halkaas oo lagu qaban doono bandhig iyo madal, sida uu sheegayo gobolka Rospotrebnadzor, ugu sarreeya ee dhacdooyinka weli lama gudbin. Xiriirintan, dhowr xannibaado ayaa wali jira waxaana jira halis caafimaad oo loogu talagalay soo-bandhigyada, booqdayaasha iyo la-hawlgalayaasha bandhig.
Bandhigga AgroExpoSibir iyo Agroindustrial Complex ee Siberia: Waqtiga xaadirka ah iyo Madasha mustaqbalku waxay caddeeyeen muhiimadooda, sidaa darteed qabanqaabiyeyaashu ma damacsan yihiin inay gabi ahaanba ka baxaan dhacdooyinka. Sida ku xusan go'aanka, sanadka 2020 AgroExpoSibir waxaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah. Madasha agrarian-ka caalamiga ah "Agro-warshadaha warshadaha ee Siberiya - hadda iyo mustaqbalka" ayaa sidoo kale lagu qaban doonaa qaab wax laga beddelay.
Abaabulayaasha ayaa bixin doona macluumaad faahfaahsan mustaqbalka dhow.
Bandhigga AgroExpoSibir ee gobolka Siberian waxaa lagu qaban doonaa qaabkii caadiga ahaa, qaabka dhabta ah mar labaad deyrta 2021.
Websaydhka Bandhigga: www.agroexposiberia.ru
Tags: "AgroExpoSibir-2020"Qaabka khadka tooska ahcoronavirus